u-De Klerk, u-Du Preez no-Bosch banqoba i-series ngo-4-1
Nadine de Klerk of the South Africa Women (The Momentum Proteas)
eLucknow: u-Nadine de Klerk ukhiphe izinti ezintathu eshwiba kahle ama-Momentum Proteas okusize bahlele indlela yabo ekunqobeni ngezinti ezinhlanu behlula i-India – futhi ngomphumela ka-4-1 – kwi-One-Day International yesihlanu e-Ekana Cricket Stadium e-Lucknow ngoLwesithathu.
i-all-rounder encane ithole i-career-best u-3/35 kuma-overs awu-10 futhi ebesekwe u-Tumi Sekhukhune (2/26), u-Nondumiso Shangase (2/43) no-Marizanne Kapp (1/25) njengoba iqembu lasekhaya likhishwe lonke ngo-188 kuma-overs awu-50.
u-Mignon du Preez ushaye u-57 (100 balls, 4 fours) no-Anneke Bosch ushaye u-50 wakhe wokuqala u-58 emabholeni awu-70 (8 fours) ukutakula izivakashi enkingeni ngasekuqaleni ukujaha umphumela kusele amabhola awu-10.
Ushaye u-36 emabholeni awu-42 u-Kapp kanye no-19 oshaywe u-De Klerk engakhishwanga ukuqinisekisa ukuthi i-South Africa ihambe inqobe kahle i-bi-lateral series.
Iqembu lomqeqeshi u-Hilton Moreeng lingene kumdlalo wesihlanu futhi wokugcina benolwazi lokuthi sebeyinqobile i-series, kodwa kade besazimisele ukuqeda kahle.
Baqale kahle futhi u-Priya Punia, u-Smriti Mandhana (bobabili 18) no-Punam Raut (10) basheshe bakhishwa u-Kapp, u-Sekhukhune no-Shangase ngokulandelana kwabo ukushiya ama-Indians ku-53/3 kwi-over yesi-13.
Inhlanganiso yama-runs awu-71 ngenti yesine phakathi kwa-Mithali Raj no-Harmanpreet Kaur (30) kulandele ukubeka iqembu lasekhaya endleleni – futhi ngesikhathi esifanayo basongelwa ukushintsha umdlandla.
Kodwa u-Kaur uphoqeleke ukuthi athathe umhlalaphansi elimele ku-124, ukuvulela ama-Proteas umnyango.
Futhi baligxumele ithuba nge-seamer u-De Klerk ehamba phambili ekuhlaseleni njengoba i-India izithole ku-137/3 bafika ku-188 bephume bonke kuma-overs awu-49.3. Ukapteni u-Raj usale yedwa ku-79 emabholeni awu-104 (8 fours, 1 six).
Ngaphandle kwa-Lizelle Lee ophunyuziwe, u-Sune Luus uvule ngokushaya, kodwa ube oyedwa wezinti ezintathu ezikhishiwe, ukushiya ama-South Africans enkingeni.
Ukapteni ushaye u-10 futhi wakhishwa emuva kokuthi u-Laura Wolvaardt (0) no-Lara Goodall (1) kushiye umphumela ku-27/3 kwi-over yesi-11.
u-Du Preez kanye nomdlali omusha u-Bosch bahlaselile, kodwa, njengoba behlanganise u-96 ngenti yesine ukubuyisela iqembu labo endleleni. u-Du Preez uze wathola u-50 wakhe wesi-17 wama-ODI futhi u-Bosch wathola owokuqala.
Emuva kokuthi bakhishwe ngokulandelana, u-Kapp no-De Klerk baqede umsebenzi ngenhlanganiso yama-runs awu-58 ukubeka iqembu labo ekunqobeni.
i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas anezinkontileka ku-2021/2022 i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-ODI series e-India u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series u-Lee okhaliphile usize ama-Momentum Proteas abe ngaphambili ngo-2-1 Ama-Proteas ka-Moreeng afunde kokuhlangenwe nakho okwedlule Uhambo lapho kungaziwa khona: u-Sune Luus Ama-Momentum Proteas amemezela iqembu kanye nohlelo lohambo lase-India u-Moreeng ubheke okukhulu kwi-World Cup emuva kwempumelelo nge-Pakistan i-CSA iyaziqhenya ngo-Ismail othole umklomelo we-ICC i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-T20 series u-Ismail no-Brits basize ama-Momentum Proteas abe ngaphambili ngo-2-0